China Terpene pinene resin mama ihe onwunwe factory na suppliers | .BỌCH.
Liquid terpene resin, nke a makwaara dị ka polyterpene ma ọ bụ osisi pinene, bụkarị usoro nke polymer linear site na mmiri ruo na nke siri ike kwadebere site na polymerization cationic nke a-pinene na b-pinene site na turpentine n'okpuru Lewis catalysis. Ọzọkwa, cationic copolymerization nke a-pinene na b-pinene ya na monomers ndi ozo (dika styrene, phenol, phenol na formaldehyde) ka eji mee ihe na terpenes - resins nke terpene dika styrene, terpenol na terpene phenolic.
Liquid terpene resin bụ odo odo na transperent.With radieshon na-eguzogide, ịka nká na-eguzogide, iguzogide itughari acid, itughari alkali, mgbochi crystallization, ike eletriki mkpuchi na ndị ọzọ properties.It bụ soluble na benzene, toluene, turpentine, mmanụ ụgbọala na ndị ọzọ na organic solvents , ma unyi anaghị agbasa na mmiri, formic acid na ethanol.
★ Omume njirimara ngwaahịa
1. Magburu onwe ya viscosity mbụ;
2, ezigbo nguzogide oyi;
3, obere ngwugwu molecule, dị mfe emulsify;
4. Ezigbo ndakọrịta na SIS, SBS, EVA na roba nkịtị.
★ Anụ ahụ na kemịkal
1. Ìhè odo transperent viscous mmiri mmiri;
2, onwere ihe osiso uto terpene;
3, eguzogide radieshon, mgbochi crystallization, dịtụ mụ oxygen, okpomọkụ, ìhè, ike iguzogide asịd, alkalis, eletriki mkpuchi;
4, dị mfe soluble na benzene, toluene, turpentine, mmanụ ụgbọala, wdg, anaghị edozi mmiri, methanol na ethanol.
★ Isi eji
1, SIS, SBS gbazee agbaze;
2. Mmiri na-echebe akwụkwọ na-echebe akwụkwọ;
3. Masking mpempe akwụkwọ.
Liquid terpene resin bụ ezigbo ọkpọka. Arụ ọrụ ya na-arụ ọrụ dị elu karịa ngwaahịa rosin rosin ndị gbanwere agbanwe na mmanụ ọkụ.
Ọ bụkwa onye na-agbanwe ihe ọkụ na-agbaze agbaze. Ọ nwere a dịgasị iche iche nke ngwa. A na-eji ya eme ihe na roba, nrapado ya, na ihe ndị na-emetụta nrụgide. Ihe ntanye, mkpuchi agbaze na-ekpo ọkụ, agba,
inks dị elu, nkwakọ ngwaahịa, mmanụ na-egbochi nchara na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Njirimara Ngwaahịa Ngwaahịa
3, obere molekụla dị arọ, emulsification dị mfe;
4. Ọ bụ soluble na SIS, SBS, EVA na eke roba.
Njirimara nke anụ ahụ na nke kemịkal nke ngwaahịa
1, ìhè odo transperent viscous mmiri mmiri;
2, enwere obere okpukpo terpene;
3, radieshon na-eguzogide, mgbochi crystallization, dịtụ mụ oxygen, okpomọkụ, ìhè, ike mkpuchi ihe na acid, alkali, ọkụ eletrik;
4, soluble na benzene, toluene, turpentine, mmanụ ụgbọala, unyi anaghị agbasa na mmiri, methanol na ethanol.
2, mmiri na-echebe akwụkwọ na-echebe akwụkwọ;
3. Meiwen teepu na-echebe akwụkwọ, wdg.
Liquid terpene resin bụ ụdị nke magburu onwe tackifier, tackifier arụmọrụ dị mma karịa nke rosin rosin gbanwetụrụ ihe onwunwe na mmanụ ala resin, wdg, ọ bụkwa nke na-ekpo ọkụ-gbazee ihe mmeghari applicability bụ obosara na roba, nyagide, mgbali mwute nrapado teepu , agadi mkpuchi na-agbaze agba agba, agba, ink, nkwakọ ngwaahịa, mmanụ na-enweghị nchara, chewing gum na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Nke gara aga: Abụọ-mbadamba osisi mama
Osote: Universal mama / Super SBS All-nzube General nrapado gluu
Akwụkwọ plastic mama agba ebi akwụkwọ laminated ụgbọ ala ...
Super oké polyvinyl mmanya akwụkwọ mama transp ...